चार वर्षदेखि दाहसंस्कार हुन नसकेको... :: शोभा शर्मा :: Setopati
शोभा शर्मा काठमाडाैं, जेठ २२
'पढाउने सरहरूले पनि छोइन्छ भनेर तर्किँदा मन खिन्न हुन्थ्यो। साथीहरूले त सार्की भनेर हेलाहोचो गर्थे। उनीहरूलाई मन लागे कुट्थे। हामीले केही बोल्नै पाउन्नथ्यौं,' हरिभक्तले भने, 'यस्तो व्यवहार सहनै सकिन्थेन। चित्त पनि बुझ्दैनथ्यो।'
सबभन्दा बढी चित्त त हरिभक्तलाई एउटै कक्षामा पढ्ने आफ्नै काकाका छोराले 'सार्की' भन्दा दुख्थ्यो।
'गाउँका जान्ने-सुन्ने पढालेखा मानिस जम्मा भएछन्। बुवाको जनै काटिदिएछन् र मिजार गाउँमै बस् भन्दै पठाएछन्,' हरिभक्तले काकाबाट सुनेको आफ्ना आमाबुवाको कथा सुनाए।
उनका आमाबुवाको बिहे भयो। यसरी उनका क्षत्री बुवाको 'जात घटुवा' भएको थियो।
'अनि अशंमा त बुवाको हक लाग्छ, अहिलेसम्म पाउनुभएको रहेनछ,' त्यतिखेर हरिभक्तले काकासँग भने।
'तेरो बुवालाई भारत पठाउन बाले खेत बेचेर पैसा दिनुभएको थियो। तिमीहरूको अंश त्यही हो,' काकालाई उद्धृत गर्दै उनले सुनाए।
'छोराको दाहसंस्कार नगरी बुवाको श्राद्ध कसरी गरूँ?' उनले भने, 'न्याय नपाई उसको आत्माले शान्ति पाउन्नजस्तो लाग्छ, कसरी जलाऊँ?'
'वकिल हुँ, तिमीहरूको छोरालाई बलात्कार मुद्दा लगाइदिन्छु भनेर फोन गर्थे, कहिले के भनेर थर्काउँथे,' उनले भने।
'हामीले त पोस्टमार्टम गरेर लास गाडिसक्यौं,' त्यहाँका प्रहरीले उनीहरूलाई उत्तर दिए, 'मृतकको सनाखत हुन सकेन, अनि हामीले गाड्यौं।'
'पोस्टमार्टम गरेको भन्दै थियो, तर गरेजस्तो केही थिएन। पोस्टमार्टम गर्दा शरीर चिर्छ नि, त्यस्तो चिरेको थिएन,' हरिभक्तले सम्झिए, 'त्यसरी हतार-हतारमा त मिलेमतो नभई किन गाड्थ्यो? कम्तिमा सोधिखोजी त प्रहरीले गर्नुपर्थ्यो।'
'ध्रुव भन्ने भोजबहादुर पराजुली, विनोद भन्ने टेकबहादुर पराजुली, सम्झना पराजुली (कार्की) समेतले निगरानी गरी परिपञ्च मिलाई २०७३ असार २९ गते घरबाट निस्किएका अजितलाई घटनास्थल पुर्‍याई, रक्सी खुवाई अर्धचेत अवस्थामा ल्याएर झुन्ड्याइ मारेको दशी सामानबाट पुष्टि हुन आएको छ,' अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
'मृतक कर्तव्यबाट मरेको कुरा लाश खुम्चिएको र तल आँटीका भागमा टेकेको भन्ने मुचुल्का र संलग्न फोटोबाट पुष्टि हुनुका साथै बुझिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको‍ कागजबाट (बयान) समर्थन गरेको देखिएको छ,' अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
'दोषीहरू खुलेआम हिँडिरहेको सम्झेरै मन पोल्छ र अदालतको अन्तिम फैसलामा न्याय पाइन्छ कि भनेर कुर्न मन लाग्छ,' उनले भने, 'छोराको आत्माले पनि त न्याय पाएपछि शान्ति पाउला!'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २३, २०७७, १०:२०:००